Akụkọ - Oxford Fabric dị iche iche
Oxford Fabric dị iche iche
E nwere ọtụtụ ụdị ewu / njupụta / arọ maka oxford ákwà dị iche iche, eg105D, 210D, 300D, 420D, 600D, 900D, 1200D, 1680D, ugbu a, anyị ga-ekwu ọtụtụ ewu ewu na-eji oxford akwa.
1680D akwa oxford bụ akwa oxford kacha sie ike na nke na-adịgide adịgide kwuru.1680D oxford akwa bụ akwa eriri oxford okpukpu abụọ, nke a na-eji 800D * 800D abụọ warp na akwa akwa akwa okpukpu abụọ, nwere ike ike siri ike ma na-eyi nguzogide.A na-ejikarị ya eme ihe maka akwa akpa akwa.
600D oxford akwa (6×6), kpara si larịị 600D * 600D na mmiri jet loom, na a ọnụ ụzọ obosara nke banyere 150cm.600D Oxford akwa nwere njiri mara oke, ezigbo ngbanwe, ike siri ike na ịdịte aka dị mma.A na-eji ya eme ihe maka akpa, ụlọ, ọtụtụ ụdị akpa wdg, dịka akpa egbe anyị na-ebufe kwa afọ, akpa azụ, akpa duffle, akpa èbè, akpa tote, akpa ụta & ụta, akpa mkpanaka wdg n'èzí, anyị enwetala afọ iri ndị ahịa. nzaghachi dị mma na-akpata maka ịdị mma na-eguzogide eyi eji n'ahịa mba ofesi.
420D oxford akwa, njupụta 20×24, gram arọ 210, ọnụ ụzọ obosara 150cm.Mgbe agbachachara na imecha, mkpuchi mmiri, mkpuchi PVC na ọgwụgwọ ndị ọzọ, akwa 420D oxford nwere agba na-egbuke egbuke, ume iku ume, mkpuchi mmiri, mkpuchi ọkụ, sunscreen, nchebe UV, iguzogide mildew, iyi mgbochi na njirimara ndị ọzọ.A na-ejikarị ya eme akwa dị n'èzí dị ka ụlọikwuu.
The ot njupụta nke 210D oxford ákwà bụ 20 × 24 (na njupụta gram arọ nwere ike ahaziri dị ka ndị ahịa mkpa), na gram arọ kwa square mita bụ banyere 155. 210D oxford ákwà nwere ike mere n'ime nkwakọ akpa, handbags na lining. / akụkụ nke akpa site na nkịtị post-ọgwụgwọ usoro, nke na-achọ nro udidi na obere eyi;Ọ bụrụ na ihe ndị a chọrọ dị ntakịrị elu, a ga-emeso ha mgbe mkpuchi, mkpuchi mmiri na ọlaọcha.Enwere ike iji ha maka uwe ụgbọ ala, ụlọikwuu, akpụkpọ ụkwụ, akpa azụ azụ, igbe nchekwa, uwe mgbakọ dị mfe, mkpuchi mgbasa ozi na ihe ndị ọzọ.
Nkewa ọrụ nke akwa oxford: akwa mkpuchi ọkụ, akwa oxford enweghị mmiri, akwa PVC oxford, akwa PU oxford, akwa camouflage oxford, akwa oxford fluorescent, akwa oxford e biri ebi, akwa oxford mejupụtara, wdg.
Oge nzipu: Mar-02-2022